Maxaa ka cusub shirka Hobyo | Radio Banadir
Home Dhacdooyinka Maxaa ka cusub shirka Hobyo
Maxaa ka cusub shirka Hobyo
Axad RBB News:- Madaxweynihii hore ee dowlad Goboleedka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo khudbad ka jeediyay Shirka Nabadda ee ka socda magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug ayaa si qoto dheer uga hadlay ahmiyada uu leeyahay shirkaas.
C/kariin Guuleed ayaa sheegay in shirka Hobyo uu fure u noqon karo dib u heshiisiin guud oo dhex marta Shacabka Soomaaliyeed, isagoo boggaadiyay marxaladihii uu shirkan soo baray.
“Shirkaan ahmiyada uu leeyahay waxaa ka qeyb ah inuu qeyb weyn ka qaadan doono dib u dhiska labaad ee dowlad goboleedka Galmudug, dadka halkaan fadhiya qeyb muhiim ayay ka yihiin dhismaha iyo jiritaanka Galmudug, iyagoo isku uur noqon kara, is fahamsan oo mideysan waxay fududeyneysaa in maamulkaas dib loo dhiso, doorashooyinkiisa iyo dib u dhiskiisa loo sameeyay”ayuu yiri C/kariin Guuleed.
Waxaa uu sheegay in Shirka Hobyo uu fure u noqon karo Soomaali oo heshiisa, isagoo xusay in aanay weli dhicin dib u heshiisiin dhab ah, oo laga heshiiyay wixii la isku geystay ee dadka dhex maray, balse horay u dhaceen shirar dib u heshiisiin ah oo kuraas lagu qeybsanayay.
“Shirkaan wuxuu dhagax dhig u noqon karaa dhib u heshiisiin dhab ah oo Soomaali dhex marta, idinkoo heshiis ahna ayay fure u noqon kartaa”ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Galmudug.
C/kariin Xuseen Guuleed ayaa dhowaan sheegay inuu siyaasadda dib ugu soo laabtay, isagoo ku dhawaaqay in Xisbi siyaasi ah uu sameyn doono, kaddib markii uu ka baxay Isbaheysigii uu la ahaa saaxibadiisa ay muddo ka wada soo shaqeeyeen siyaasada iyo arrimaha bulshada.
Previous articleEritrea, Somalia pet projects that keep Abiy awake
Next articleHowlgalo laga fuliyay Deegano Gobolka Sh.hoose oo lagu dilay xubno katirsan Al Shabaab